Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo | Nashville VOAD
Ujeedada Nashville VOAD waa in la xoojiyo isku-dubbaridka iyo u-diyaargarowga musiibada deegaanka oo dhan iyo ka-qaybgalka qorshaynta, waxbarashada, iyo tababarka wadajirka ah. Inta lagu jiro waqtiyada masiibada firfircoon, waxay siisaa hal dhibic oo iskudubarid dhammaan ururada doonaya inay caawiyaan badbaadayaasha.
Waa maxay VOAD?
Ururada iskaa wax u qabso ah ee ka shaqeeya masiibada ama “VOAD” waa qaabdhismeed siiya hannaan loogu talagalay wakiilada hay’adaha iskaa wax u qabso ah iyo ururada leh door, ujeedo ama ka shaqeeya wax ka qabashada musiibada iyo soo kabashada shabakada iyo wadaaga macluumaadka.
VOAD waxay u heellan tahay ka-qaybgalka bulshada oo dhan waxayna aqoonsan tahay in dhammaan qaybaha bulshadu ay tahay inay iska kaashadaan sidii loo kobcin lahaa bulshooyin adkeysi leh.
Waa maxay hadafka Nashville VOAD?
Hadafka Nashville VOAD waa:
Kordhi awooda lagu bixiyo adeegyo hufan oo ka badbaaday masiibooyinka;
Ka jawaab celinta wanaagsan ee musiibooyinka iyada oo loo marayo iskaashi, isgaarsiin, iskudubarid, iyo iskaashi;
Shabakad oo la wadaag dhaqamada ugu wanagsan shaqsiyaadka iyo ururada firfircoon ee wax ka qabashada musiibada.
Waa maxay Wareegtada Maareynta Degdegga ah ee VOAD Nashville?
Yaraynta – Yaraynta saamaynta masiibooyinka
Diyaargarow – Qorshaynta sida looga jawaabo
Jawaab-celinta – Ilaalinta dadweynaha iyo daboolida baahiyaha degdegga ah ee badbaadayaasha
Soo kabashada – Ku soo celinta bulshada si caadi ah
Maxay Nashville VOAD faa'iido ugu leedahay bulshooyinkayada?
Nashville VOAD faa’iido ayay u leedahay bulshadeena sababtoo ah:
Waxay dhistaa xidhiidhada iyo kalsoonida ka dhaxaysa ururada iyo la-hawlgalayaasha bulshada;
Wuxuu isu keenaa kooxo kala duwan si ay u abuuraan xal;
Waxay kordhisaa adkeysiga bulshada iyadoo loo marayo diyaargarowga iskaashiga iyo dadaalka tababarka;
Wuxuu abuuraa qaab-dhismeed jawaab celin ah oo isla markiiba la geyn karo musiibo;
Waxay kordhisaa isuduwidda ururada shuraakada ah taasoo horseedaysa hoos u dhaca adeegyada;
Waxay siisaa meelaha lagala xiriiro maareeyayaasha xaaladaha degdegga ah waxayna u ogolaataa habsami u socodka macluumaadka musiibada;
Waxay taageeri karaan horumarinta soo kabashada muddada-dheer iyagoo taageeraya kooxaha soo kabashada muddada-dheer iyo hawlahooda;
Waa ilo waxbarasho oo loogu talagalay deganayaasha bulshada.
Waa maxay agabka Nashville VOAD ay bixiso?
Nashville VOAD waxay siisaa xubnaha aan xubnaha ka ahayn iyo kuwa aan xubnaha ka ahayn tababaro iyo dukumentiyo hagitaan kala duwan oo ku saabsan xarunta kheyraadka mareegahayaga oo daboolaya wax walba laga bilaabo isgaarsiinta ilaa maamulka iskaa wax u qabso. Sababtoo ah iskaashiga ay la leedahay Xafiiska Maareynta Degdegga ah, Nashville VOAD waxay ku qalabaysan tahay macluumaadka gacanta koowaad ee ku saabsan dadaallada wax ka qabashada musiibada ee magaalada oo dhan.
Kuwa ka badbaaday masiibada, ururada xubinta ka ah Nashville ee VOAD waxay ku siin karaan agab ay ku jiraan cunto iyo nafaqeyn, guri ku meel gaar ah iyo kuwo joogto ah, la talin shucuureed iyo mid ruuxeed, shaqaaleysiin mutadawacnimo, kaalmo maaliyadeed oo toos ah, alaabta muhiimka ah, caymiska iyo dhexdhexaadinta FEMA, kaalmada sharciga iyo wax ka badan.
Waa maxay xiriirka ka dhexeeya magaalada iyo VOAD marka ay timaado ka jawaabista musiibada?
Xidhiidhka u dhexeeya Nashville VOAD iyo Metro Nashville Xafiiska Maareynta Degdegga ah (OEM) waa qayb muhiim ah oo lagu guuleysto VOAD. Khibrada Metro Nashville OEM ee u diyaargarowga musiibada, yaraynta, ka jawaabista, iyo soo kabashada waa kheyraad muhiim ah.
OEM waxay siin doontaa tababar iyo waxbarasho musiibo dhammaan xubnaha VOAD waxayna ka go’an tahay inay iskaashi la sameyso Nashville VOAD si loo xaqiijiyo jawaab-celin isku xiran oo dhexmara magaalada iyo xubnaha VOAD.
Marka laga soo tago xiriirka Nashville VOAD ee OEM, dhowr kale oo u diyaargarowga musiibada iyo la-hawlgalayaasha wax ka qabashada ayaa gacan ka geysan doona bixinta tababarrada xubnahayaga.
Yaa xubin ka noqon kara Nashville VOAD?
Ururada xubnaha ka ah Nashville VOAD waxay matalaan koox kala duwan oo ah ururo tayo sare leh kuwaas oo bixiya xirfado kala duwan oo u adeega deriskeena iyo bulshadayada. Ururada xubnaha ka ah waxay leeyihiin hawlgalo ku jihaysan adeega waxayna ku daraan ka qayb qaadashada tabaruca qayb ka mid ah hawlahooda.
Xubnaha Nashville VOAD waxay u heellan yihiin ka-qaybgalka bulshada oo dhan waxayna aqoonsadeen in dhaqdhaqaaqa VOAD ay qiyamka iyo dhaqamada ka dhigan yihiin hab la xaqiijiyay oo lagu dhisayo bulshooyin adkaysi leh.
Isku darkayada caqiidada ku salaysan, bulshada ku salaysan, iyo kuwa kale ee aan faa’iido doonka ahayn, ururada aan dawliga ahayn (NGO-yada) waxay matalaan boqolaal shaqaale xirfad leh iyo mutadawiciin leh xirfado gaar ah iyo ruux kheyraad leh.
Adeegayga aan faa'iido doonka ahayn maaha mid musiibo udub dhexaad u ah laakiin waxaanu siinaa adeegyo jaarkeena u baahan wakhtiyada musiibada. Taasi miyay xadidaysaa awooda ururkaygu inuu xubin ka noqdo?
Maya, ma aha! Waanu soo dhawaynaynaa hay’ad kasta ama hay’ad kasta oo dan iyo karti u leh inay u adeegto bulshada wakhtiyada masiibada, iyadoon loo eegin shaqadaada maalinlaha ah. Xubinnimada Xiriirku waxay noqon kartaa tan ugu habboon ururkaaga. Wax badan ka baro heerarka xubinnimadayada halkan .
Waa maxay dukumeenti aan u baahanahay si aan xubin uga noqdo?
Dhammaan xubnuhu waa inay saxeexaan Warqadda Ballanqaadka ee Nashville VOAD .
Xubnaha bixiya agabka ama adeegyada badbaadayaasha shakhsi ahaan ama qoys ahaaneed ee musiibada ka dib waxay sidoo kale saxeexaan Nashville VOAD / Memorandum of Understanding Sadaqo (MOU).
Waa maxay Tracker Sadaqo iyo muxuu ururkaygu ugu baahan yahay inuu saxeexo MOU?
CharityTracker waa madal xogeed la wadaago oo u ogalaata ururada ka shaqaynaya hadafyo la mid ah in ay isku dubaridaan adeegyada oo ay habeeyaan tixraacyada si loo xaqiijiyo khibrad waxtar leh oo macmiil/badbaadiye ah. CharityTracker waxay u ogolaataa hal urur, ama macmiilka/badbaadiyaha laftiisa inay dhamaystiraan qaadashada. Tani waxay yaraynaysaa xadiga dhaawaca iyo ku celcelinta macmiilku la kulmi doono marka uu hawshan ka dhamaystiro ururo badan. Urur kasta oo isticmaala Charity Tracker waxa looga baahan yahay inuu saxeexo MOU si loo hubiyo in dhammaan xogta macmiilka/badbaaduhu lagu hayn doono sirta ugu saraysa, kombayutarada iyo shabakadaha waxay noqon doonaan ammaan si ay u ilaaliyaan xogtan la wadaago, dhammaan isticmaalayaasha ururka ee la ansixiyay waxay u hoggaansami doonaan sirta. ee macluumaadka macmiilka muhiimka ah sida.”
Tracker Charity waxaa isticmaala xubnaha Nashville VOAD ee bixiya adeegyada badbaadayaasha shakhsi ahaan ama qoys ahaan ka dib musiibo. Haddii hay’addaada ama ururkaagu aysan ku dhicin qaybtaas lagama filayo inaad isticmaasho, mana aha inaad gudbiso MOU.
Haddii aan xubin ka ahaa sannadkii hore, ma u baahanahay inaan cusbooneysiiyo sanadkan?
Haa Xubin kastaa waa in uu dib ugu ballan qaadaa Nashville VOAD sanad walba. Tani waxay hubinaysaa in xidhiidhka iyo macluumaadka agabku ay yihiin kuwo casri ah.
Sideen wax badan u baran karaa ama u noqon karaa xubin Nashville VOAD?
Waxaad wax badan ka baran kartaa kooxda iyo xulashooyinka xubinnimada adiga oo la xiriira [email protected] Hay’adaha danaynaya waxaa lagu dhiirigelinayaa inay la soo xiriiraan.
Waxaan sidoo kale ku dhiirigelineynaa ururada xubnaha ah ee ku biirin kara khibradaha dhinacyada kala duwan ee habka soo kabashada si ay ugu biiraan Guddiyadayada (sida Maareynta Kiisaska Musiibada, Isgaarsiinta, Dhismaha, Diyaargarowga, Tababarka & Guddiyada Ka-qaybgalka).
Yaa noqon kara lammaane Nashville VOAD?
Nashville VOAD waxay qaadaa habka ay u dajisay VOAD-ga Qaranka: horumarinta xidhiidhada iskaashiga iyo dhaqanka bulshada oo dhan inta lagu jiro wareegga musiibada. Waxaan aqoonsannahay in dhammaan qaybaha bulshadu ay tahay inay iska kaashadaan sidii loo kobcin lahaa xaafado adkeysi badan, isku kalsoon. Waxaan iskaashi la samaynaa shirkadaha macaash doonka ah, aasaaska, machadyada waxbarashada iyo cilmi baarista, iyo wakaaladaha kale ee dawliga ah.
Anigu urur ma metelo, balse waa xubin bulshada ka mid ah. Sideen uga qayb qaadan karaa Nashville VOAD?
Sida ugu fiican waa inaad ku xidhnaato fursadaha iskaa wax u qabso ee laga heli karo aaggaaga. Waxaad ku bixin kartaa tabaruc xubnaha Nashville VOAD halkan . Waxa kale oo aad nagu raaci kartaa Facebook, Twitter, ama Instagram si aad isha ugu hayso fursadaha tabaruca ah iyo deeqaha, oo aad ka caawiso wadaagida ereyga shaqada iyo baahiyaha VOAD.
Ma ku deeqi karaa Nashville VOAD?
Sanduuqa Hoggaaminta VOAD ee Mu’asasada Bulshada ee Tennessee Dhexe waxa ay taageertaa shaqada Nashville VOAD ee ka qaybqaadashada afarta waji ee maaraynta musiibada: Diyaarinta, Yaraynta, Jawaabta iyo Soo kabashada. Hadiyadaha Sanduuqan waa kuwo cashuur laga jarayo.
Waxa kale oo aad si toos ah ugu deeqi kartaa xubnahayaga adiga oo gujinaya isku xirka shabakadooda ee bogga xubnaha boggayaga. Habka ugu wanaagsan ee saameyn loogu yeelan karo nolosha badbaadayaasha waa in hadiyad loo sameeyo xubnaha Nashville VOAD iyo wakaaladaha kale ee wax ka qabashada deegaanka.
Nashville VOAD Xubnaha